यो अराजकता रोक्न नसके दुर्गति
महालक्ष्मी उपाध्यय डिना, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
मावलीतर्फका हजुरबा उदयनाथ अधिकारीको संघर्षपूर्ण राजनीतिक यात्राबाट प्रभावित भएर नेपाली कांगे्रसको राजनीतिमा लाग्नुभएकी महालक्ष्मी उपाध्याय, ‘डिना’ को यात्रा भने नेपाल विद्यार्थी संघबाट सुरु भएको हो । नेपाली कांगे्रस केन्द्रीय सदस्य डिना २०४२ सालको सत्याग्रहमा शैलजा आचार्यसँगै जेल पुग्नुभएको थियो । २०४३ सालमै नेपाल विद्यार्थी संघबाट पद्मकन्या कलेजको स्ववियु सभापति बन्नुभएको उहाँ पार्टीको ११ औं महाधिवेशनदेखि केन्द्रीय सदस्य बन्दै आउनुभएको छ । पूर्वराज्यमन्त्री डिनासँग स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर तरुण प्रतिनिधिले गरेको कुराकानी–
० नेपाली कांग्रेसले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जुन परिणाम ल्यायो, यो अपेक्षित कि स्वभाविक ?
– दोस्रो चरणको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको पोजिसन पहिलो हुन्छ भन्ने हामीले ठानेका थियांै । केही ठाउँमा हामीले राम्रो परिणाम पनि ल्याएका छौं, तर समग्रमा हामी दोस्रो हुन पुग्यांै । यस्तो परिणाम आउँछ भनेर हामीले अपेक्षा गरेकै थिएनौं । तर जनमतलाई स्वीकार गरेरै अगाडि बढ्छौं,बढ्नु पर्छ ।
० यस्तो परिणाम आउनुमा के के कमजोरी देख्नु भयो ?
– केही कमजोरी हामीबाट पनि भएका छन् । समयमा टिकट वितरण गर्न नसक्नु, सञ्चार रणनीति नबनाईनु, साधनस्रोतको व्यवस्थापन र परिचालनमा ध्यान दिन नसक्नु एवं प्रत्येक पालिकामा नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकाश नहुनुले हामीलाई क्षति पु¥याएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा पार्टीभित्रको आन्तरिक कारणले पनि यस्तो परिणाम आएको सूचना पनि छ । केही ठाउँमा पार्टीभित्रैबाट असहयोग भएको गुनासो पनि आएको छ । पार्टीले अनपेक्षित परिणाम भोग्नुको प्रमुख कारण पार्टीभित्रबाटै सहयोग नुहुन हो भन्ने मलाई पनि लागेको छ । अर्को कुरा, हामीले आफ्नो सांगठनिक स्वरूपलाई समय अनुकुल मजबुत गर्न नसकेको पनि हो । जुनसुकै परिस्थितिमा पनि पार्टीको संगठनलाई मजबुत बनाउनुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनले हामीलाई पाठ सिकाएको छ ।
० त्यसबाहेक अरु कमजोरी भेटिएन ?
– नेपाली कांग्रेसले नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता दिलाएको छ । कुनै पनि विषयमा राज्यमाथि प्रश्न गर्ने अधिकार दिएको छ । नेपाली कांग्रेस जनताको हकहित र अधिकारका पक्षमा काम गरिरहेको पार्टी हो । नेपाली कांग्रेसबाहेक अरु कुनै पनि पार्टीले जनताको पक्षमा धेरै काम गरेका छैनन् । अहिलेसम्मका हरेक आन्दोलन र परिवर्तको नेतृत्व कांग्रेसले नै गरेको छ । अरु पार्टी कुरा मात्रै गर्छन्, तर नेपाली कांग्रेसले काम गर्ने गरेको छ । आफूले गरेको कामलाई जनतामाझ लैजाने काम विभिन्न सञ्चार माध्यमको हो । सञ्चारमाध्यममा नेपाली कांग्रेसको व्यापक उपस्थिति नभएको हो कि भन्ने महसुस अहिले हामीले गरेका छौ ।
गाउँघरमा हामी जाँदा जुनसुकै विकास निर्माणका काम नेपाली कांग्रेसको पालामा भएको हामीले पाएका छौं । जनताको काम नेपाली कांग्रेसले गरेको हो, त्यसैले नेपाली कांग्रेसलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने भावना जगाउने काममा नेपाली कांग्रेसको सांगठनिक संरचना बलियो नबनाइएको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ । मूलतः यी तीन कुरालाई मैले कांग्रेस पराजय हुनुको कारण देख्छु । पार्टीभित्र हाम्रा सबै साथीहरूलाई एकजुट बनाउन सकैनौं । कांग्रेसले गरेको राम्रो कामलाई जनतामा लैजान हामीसँग सञ्चारमाध्यमको कमी भएकै होे । अर्को कुरा, सांगठनिक संरचरनालाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेनौं । हामीले नेपाली कांग्रेसलाई मासबेस पार्टी भन्यांै । मासलाई मात्र ध्यान दियौं, तर संगठनलाई बलियो बनाउन सांगठनिक स्वरूपमा पार्टीका साथीहरूलाई प्रशिक्षित गराउने र उनीहरूलाई निर्वाचनमा अघि बढाउने काम हामीले गर्न नसकेकै हो । यो पनि हामो तर्फबाट कमीकमजोरी रह्यो ।
० स्थानीय निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसको पोजिसनमा तल–माथि पर्ने भयो होइन ?
– स्थानीय निर्वाचनलाई हेरेर कांग्रेस दोस्रो पार्टी भएको भन्न मिल्दैन । २०५४ सालपछि अहिले स्थानीय चुनाव भएको छ । २०५४ सालमा पनि नेपाली कांगेस यसरी नै दोस्रो पार्टी भएको थियो । तर त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो । स्थानीय तहमा स्थानीय व्यवस्थापनका कुराले पनि हामी पछाडि परेका हुन सक्छांै । तर प्रदेश र केन्द्रीय संसद्कोे निर्वाचनमा हामी नै पहिलो पार्टी हुन्छौं ।
० कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनमा अनपेक्षित परिणाम भोग्नुको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
– यसको जिम्मेवारी पार्टीमा लागेका हामी जति पनि साथीहरू छौं, ती सबैले लिनुपर्छ । अब हामीले हाम्रा कमीकमजोरीलाई महसुस गरेर पार्टीको संगठनलाई बलियो बनाउनुपर्छ । नेपाली कांग्रेस कुनै एउटा व्यक्तिले बनेको पार्टी होइन । सबै नेता कार्यकर्ताले बनेको पार्टी हो । त्यसैले यसको जिम्मेवारी पनि सामुहिक रुपमा हामी सबैले लिनुपर्छ । अहिले एउटा परम्परा नै बसेको छ, एकले अर्कोलाई दोष लगाउने । यस्तो प्रवृत्तिले संगठन बलियो हँुदैन । अब हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ, कसको कमजोरी कहाँ भयो ? त्यसको विश्लेषण गरी पार्टीभित्र आएको अराजकतालाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।
पार्टीभित्र मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानेर संगठनभित्रै काम गरेका मान्छेलाई केही साथीहरूबाट जसरी हराउने काम भयो, उनीहरूलाई नसियत दिनुपर्छ । पार्टीभित्र अनुशासन कायम गर्न सक्यौं भने कांग्रेस बलियो हुन्छ । पार्टी पराजय हुनुमा कुनै एउटा व्यक्तिलाई दोष लगाउनु हुँदैन, त्यो प्रवृति हो । समग्रमा हाम्रो व्यवस्थापन र हामीले गरेका काम कारबाहीको मूल्यांकन गरेर अघि बढ्ने हो भने अर्को चुनावमा नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी हुनेमा कुनै दुई मत छैन । अहिले हामीले स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले ल्याएको परिणाम र जनमतबारे मूल्यांकन एवं समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।
० कांग्रेस पराजय हुनुमा अन्तर्घात प्रमुख कारण हो भन्नुभयो, अब अन्तर्घात गर्नेहरूलाई कारबाही हुन्छ कि हँुदैन ?
– अन्तर्घात गर्नेहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको छ । वडा वडाबाट यसको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । कतिपय जिल्लामा वडाले नै अन्तर्घात गर्नेहरूलाई कारबाही गरेको पाइएको छ । अन्तर्घात गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले पनि गम्भीरताको साथ हेर्नुपर्छ । अन्तर्घात गर्ने नेताहरूको राजनीति अब भोलि अघि बढ्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिन आवस्यक छ । कांग्रेसले कांग्रेसलाई नै हराउने प्रवृत्ति पूर्णरूपले अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसैले यो निर्वाचनमा जसले गल्ती गरेको छ, उसले कारबाही भोग्नै पर्छ ।
० कांग्रेसले अन्तर्घातीलाई कारबाही गर्ला र ?
– अन्तर्घातीहरूलाई कारबाही गर्न केन्द्रीय समितिले नै सक्रियता देखाउनु पर्छ । तर, आफूसँगै राजनीति गरेका या आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई भोलि त्यो राजनीतिमा नआओस् भनी अन्तर्घातको आरोप लगाउने मानसिकता विकास भएको छ । यसतर्फ सचेत पनि हुनुपर्छ । सँगसँगै राजनीति गरेको मान्छेलाई आजै सक्न पाए भोलि म राजनीतिमा स्थापित हुन्छु भन्ने भावना पनि देखिन्छ । त्यसैले यसबारेमा केन्द्रीय समितिले नै व्यापक अनुसन्धान र मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
जिल्लास्तरमा पनि यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ । तर साँच्चिकै गल्ती भएको वडा तह, गाउँ तह, जिल्ला र क्षेत्रीय समितिले पनि यस कुराको मूल्यांकन गनु पर्छ ।
मेरो जिल्ला मकवानपुरमा वडामा क्रियाशील साथीहरूको भेला गरेर जसले पार्टीकै आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउने भूमिका निभाए, उनीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाईसकेका छन् । यसमा केन्द्रले हेरिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यसबारेमा जिल्लाले पनि हेर्नुपर्छ । त्यसैले कारबाही गर्ने परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छ । तर कतिपय ठाउँमा अनावश्यक आरोप लगाएर आफ्नै साथीहरूलाई सक्ने प्रवृत्ति पनि विकसित भएको छ । त्यसको हकमा भने केन्द्रले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
० कांग्रेस पराजय हुनुमा उम्मेदवारी छनोटमै कमीकमजोरी ठान्नु हुन्न ?
– कतिपय ठाउँबाट यस्तो कुरा पनि अएकोे छ । फलानोलाई टिकट दिएको भए जित्थ्यो, उसलाई टिकट नदिएकाले कांग्रेसले हा¥यो भन्ने कुरा पनि आउने गरेका छन् । तर मलाई लाग्छ, पार्टी भनेको एउटा संगठन हो । त्यसैले पार्टीमा जसलाई टिकट दिए पनि त्यो मान्छेलाई पार्टीका सबै कार्यकर्ताले सहयोग गर्नुपर्छ । चुनाव जिताउने व्यक्तिले होइन, संगठनले हो । दलीय प्रतिस्पर्धामा व्यक्तिको होइन, पार्टीको प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।
कतिपय ठाउँमा टिकट वितरणमा गलत भयो होला, गाउँ नै नदेखेको मान्छेलाई टिकट दिइयो भन्ने कुरा आएको होला, त्यसमा पनि छानबिन हुनुपर्छ । तर संगठनमा एउटा व्यक्तिलाई टिकट दिइसकेपछि पार्टीमा क्रियाशील सबैले उसलाई जिताउनुपर्छ । उसलाई टिकट दिँदा गलत भयो, मलाई दिएको भए ठिक हुन्थ्यो, मलाई टिकट दिएको भए मैले चुनाव जित्थें भन्ने कुरा पनि आउने गरेका छन् । तर यो प्रवृत्ति गलत हो, यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । यसले संगठनलाई नोक्सान पु¥याउँछ । संगठनमा जसलाई टिकट दिए पनि त्यसलाई जिताउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ । तर कतिपय ठाउँमा तपाईले भने जस्तो संगठनमै नलागेका व्यक्तिलाई टिकट दिइयो भन्ने कुरा पनि आएको छ । यो पनि गलत हो, यसलाई पार्टीले सच्याउनुपर्छ ।
० अब प्रदेश समिति र केन्द्रीय संसद्को पनि निर्वाचन हँुदैछ । केन्द्रीय संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कांग्रेसको स्थिति कस्तो होला ?
– अहिलेको निर्वाचनको परिणामलाई गम्भीर विश्लेषण गरेर सुधारको बाटोमा जानुपर्छ । स्थानीय चुनावमा कतिपय कुरामा व्यक्तिगत प्रभाव पनि परेको हुन सक्छ । तर राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा राष्ट्रलाई कसले अगाडि बढाउन सक्छ, कुन पार्टीको एजेन्डाले राष्ट्र अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा नेपाली जनताले हेर्नेछन् भन्ने मलाई लाग्छ । नेपालको हरेक कालखण्डमा नेपाली कांग्रेसले अगुवाइ गरेको छ । यो कुरालाई नेपाली जनताले बुझेका छन् । त्यसैले राष्ट्रिय चुनावमा नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसलाई भोट दिनेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ ।
यसैगरी, नेपालको सबै विकास निर्माणको काममा पनि नेपाली कांग्रेसले अगुवाइ गरेको छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान निर्माण भएको हो । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने काम पनि नेपाली कांग्रेसले नै गरिरहेको छ । कांग्रेसले जसरी काम गरिरहेको छ, यसको मूल्यांकन नेपाली जनताले गर्नेछन् भन्ने विश्वास छ ।
० आगामी माघ ७ गतेभित्र तीन तहको निर्वाचन सक्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ, अझै २ नम्बर प्रदेशको चुनाव गर्न बाँकी छ । माघ ७ भित्र तीनवटै तहको निर्वाचन सम्भव होला ?
– हाम्रा पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्रीज्यूले मंसिरमै चुनाव गराउँछु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ । असोज २ गते बाँकी रहेको २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन भएरै छाड्छ । अरु सबै प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले २ नम्बर प्रदेशमा पनि निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । त्यसैले अब अन्यथा केही परिस्थिति सिर्जना भएन भने आगामी माघ ७ भित्रै तीनवटै तहको चुनाव हुने निश्चित छ । देशको राजनीति अहिले चुनावमय भएको छ ।
० प्रसंग बदलौं, कांग्रेस कार्यसमिति, पदाधिकारी, विभागहरूले पूर्णता पाएका छैनन् कांग्रेसभित्रै समस्या छ हो ?
– यो विषयमा कसैले कुरा उठाएको छैन । हामीले निर्वाचनको कुरालाई मात्रै बढी ध्यान दिएका छौ । यो आन्तरिक कुरा हो । पदाधिकारी मनोनयन नगर्दा कांग्रेस हा¥यो भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन, त्यसका कारण कुनै काम राकिएको सुन्नु भएको छ र ? । सरकारले पनि आफ्नो किसिमबाट काम गरिरहेको छ । चुनाव बहिष्कार गर्छौं भन्ने पार्टी पनि निर्वाचनमा आएको छ, आउँदैछ । सबै राजनीतिक पार्टीलाई चुनावमा सँगै लिएर जान सरकारले पहल गरिरहेको छ । यसैगरी संविधानको अक्षरसः पालना गर्ने पहल पनि भइरहेको छ । समग्रमा देशको कुरालाई लिएर सरकार अघि बढेको छ ।
२ नम्बर प्रदेशमा पनि एकै पटक चुनाव गर्न सकिन्थ्यो तर सरकारले किन आँट गरेन ?
यो आटको, बलको कुरा होईन । रणनीतिक कुरा हो । म त भन्छु– यो सरकारको निकै ठूलो बुद्धिमतापूर्ण निर्णय हो । त्यहाँ असान्त हुँदा सबैतीरको निर्वाचन विथोलिन पनि सक्थ्यो, त्यो जोखिम किन लिने ? दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्न मिल्दा तेस्रोमा गर्न मिल्दैन भन्ने होईन, मिल्छ । अब असोज २ मा निर्वाचन हुन्छ, जनताले निर्धक्क भएर मत हाल्न पाउँछन् ।